बाँकेमा कोरो`नाको खत`रा, ५ सय नेपाली भारत वाट भित्रिए !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/बाँकेमा कोरो`नाको खत`रा, ५ सय नेपाली भारत वाट भित्रिए !!
नेपालगन्ज । भारतले लकडाउन खुुकुलो गर्दै फर्किन चाहनेहरुका लागि रेल सेवा समेत सञ्चा`लनमा ल्याएपछि बाँ`केको नरैनापुरमा सयौंको सं`ख्यामा नेपालीहरु फर्किएका छन् । त्यस क्र`ममा मंगल`बार मात्रै डुडुवा नाकाबाट २९ जना नेपाली फर्किएका छन् भने नरैनापुरमा सयौंको संख्यामा फर्किएका हुन् ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा एकै दिन झण्डै ५ सय जना नेपाली भारतबाट आएका छन्।केही दिन यता जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट गरी उनीहरु नरैनापुर फर्किएका हुन् । भारतले लक`डाउन खुकुलो बनाएपछि नेपाली घर फर्कने बढेका हुन्। भारतका विभिन्न ठाउँमा मज`दुरीका लागि गएका उनीहरु सी`मानामा पुगेपछि आफ`न्तहरु पुगेर ल्याएका थिए ।
हलवल`डोलीका केही स्थानि`यलाई भने वडा नं। ३ स्थित श्री`मा`वि डुडुवामा स्थापना गरिएको क्वारे`न्टाइनमा राखिएको डुडुवा गाउँ`पालिका नेकपा अ`ध्यक्ष सकिल खानले जानकारी दिएका छन् ।त्यस्तै, नरैनापुर गाउँ`पालिका सँग जोडिएको भारतीय नाकाबाट ठूलो सं`ख्यामा नेपा`लीहरु फर्किएका छन् । नरै`नापुर–४ का उनीहरु मु`म्बई, कान`पुर र दि`ल्लीबाट फर्किएका हुन् । उनीहरुलाई पनि स्थानी`य क्वा`रेन्टाइनमा राख्न लागिएको ब`ताइएको छ ।
ठूलो सं`ख्यामा नेपालीहरु घर फर्किए पछि उनीहरुलाई रा`ख्ने क्वारेन्टा`इनको ब्यव`स्थाका लागि समस्या भएको छ । ‘मंग`लबार सयौंको` सं`ख्यामा भित्रिएका नेपालीलाई स्था`नीय विद्या`लयमा क्वारेन्टाइन गरे`र रा`ख्ने काम भैरहेको देखिन्छ’, स्थानीय समेत रहेका पत्रकार विनय दीक्षि`तले भने, ‘अबेर सम्म पनि भारत बाट नेपाली आउने क्र`म जारी देखिन्छ ।’
भारतको नान`पारा र बह`राइचका क्वा`रेन्टाइन रहेका ५ सय बढी नेपालीलाई फर्काउन भारतीय अधिका`रीहरुले बाँ`के प्रशासनसँग औप`चारिक रुपमै पहल गरिरहेको छ । ‘हामी नेपा`लीलाई कसरी ल्याउने भन्ने के`न्द्रको नि`र्णय पर्खिरहेका छौं’, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले भने । सिमाना`का क्वारेन्टा`इनमा भारतीय नागरिकहरु पनि छन् । भारतले नेपाली`लाई सिमानामा ल्याएर छोड्न थालेपछि नेपाली क्वारेन्टा`इनमा रहेका भारतीय नागरिकलाई भारत पठाएर नेपालीलाई क्वारेनटा`इनमा राख्ने तयारी स्थानिय प्रशा`सनले गरेको छ ।
कुलमान घिसिङको समर्थन गर्दै जोरपाटीमा प्रद’र्शन
कामदारलाई वैशाखको पूरै तलब दिन निर्देशन !!!
“अहिले नै भारतबाट नेपाली नल्याऔं, को,रोना भित्रिनसक्छ ” : ओली ….यो निर्णय लाई तपाई क भन्नु हुन्छ???